कसरी DFU मोड मा एक आईफोन राख्ने, एप्पल तरीका - आईफोन
आईफोन6सबै समय खोज भन्छन्
फोन वाइफाइ बन्द छैन
icloud ड्राइव बिना कुनै लागत को लागी कती भण्डारण प्रस्ताव गरीएको छ?
DFU हो उपकरण फर्मवेयर अपडेट , र यो तपाईको आईफोनमा गर्नसक्ने पुनःस्थापनाको सबैभन्दा गहिरा प्रकार हो। एक एप्पल लीड प्रतिभाशाली मलाई आईफोनहरू DFU मोडमा राख्न कसरी सिकाउँदछन्, र एक एप्पल टेकको रूपमा, म यो सयौं पटक गरेको छु।
अचम्मको कुरा, मैले अरू लेख कहिले पनि DFU मोडमा कसरी प्रशिक्षित गरिएको थियो त्यसमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर वर्णन गरेको देखेको छैन। त्यहाँ जानकारी को एक धेरै छ केवल सादा गलत । यस लेखमा, म वर्णन गर्छु DFU मोड के हो , कसरी फर्मवेयर तपाइँको आईफोनमा काम गर्दछ , र तपाईंलाई चरण-देखि-चरण देखाउँदछ कसरी DFU आफ्नो आईफोन पुनर्स्थापना गर्न।
यदि तपाईं पढ्न भन्दा हेर्न चाहनुहुन्छ (वास्तवमा, दुबै सहयोगी हुन सक्छ), हाम्रो नयाँमा जानुहोस् DFU मोडको बारेमा युट्यूब भिडियो र कसरी DFU आईफोन पुनर्स्थापना गर्ने ।
हामीले सुरु गर्नु अघि तपाईंले के जान्नु आवश्यक छ
को होम बटन तपाईको आईफोनको प्रदर्शन मुनिको गोलाकार बटन हो।
को निन्द्रा / वेक बटन एप्पलको पावर बटनको नाम हो।
तपाईंलाई एउटा चाहिन्छ घडी seconds सेकेन्डमा गणना गर्न (वा तपाइँ तपाइँको टाउकोमा यो गर्न सक्नुहुन्छ)।
यदि तपाइँ सक्नुहुन्छ भने, तपाइँको आईफोनको जगेडा गर्न आईक्लाउड , आईट्यून्स , वा फाइन्डरले तपाईको आईफोनलाई DFU मोडमा राख्नु अघि।
नयाँ: म्याकहरू चलिरहेका म्याकोस क्याटालिना १०.१5 वा नयाँ प्रयोग फाइन्डरलाई DFU पुनर्स्थापित आईफोनहरू गर्न।
DFU मोडमा आईफोन कसरी राख्ने
तपाईंको कम्प्युटरमा तपाईंको आईफोन प्लग गर्नुहोस् र खोल्नुहोस् आईट्यून्स यदि तपाइँसँग छ भने म्याक चलिरहेको म्याकोओएस मोजावे १०.१4 वा पीसी । खोल्नुहोस् खोजकर्ता यदि तपाइँसँग छ भने म्याक चलिरहेको म्याकोस क्याटालिना १०.१5 वा नयाँ । तपाईंको आईफोन खुला वा बन्द छ त्यसले फरक पार्दैन।
स्लीप / वेक बटन र होम बटन (आईफोन s एस र तल) वा भोल्यूम डाउन बटन (आईफोन)) 8 सेकेन्डको लागि सँगै थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्।
Seconds सेकेन्ड पछि, स्लीप / वेक बटन तर छोड्नुहोस् होम बटन (आईफोन s एस र तल) वा भोल्यूम डाउन बटन (आईफोन 7) होल्ड गर्न जारी राख्नुहोस् जब सम्म तपाइँको आईफोन आइट्यून्स वा फाइन्डरमा देखा पर्दैन।
होम बटन वा भोल्यूम डाउन बटनमा जानुहोस्। तपाईंको आईफोनको प्रदर्शन पूर्णतया कालो हुनेछ यदि तपाईं सफलतापूर्वक DFU मोड प्रवेश गर्नुभयो। यदि यो छैन भने, सुरूबाट फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
ITunes वा Finder को प्रयोग गरेर तपाईको आईफोनलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्।
कसरी एक आईफोन Put, Plus प्लस, वा एक्स DFU ​​मोडमा राख्न
धेरै अन्य वेबसाइटहरूले झूटा, भ्रामक, वा अधिक जटिल चरणहरू दिन्छन् कसरी DFU तपाइँको आईफोन,, Plus प्लस, वा एक्स पुन: स्थापना गर्न बताउँदा। तपाइँले तपाइँको आईफोन पहिले बन्द गर्न बताउनुहुनेछ, जुन पूर्ण अनावश्यक छ। तपाईले DFU मोडमा राख्नु अघि तपाईको आईफोन अफ हुनु हुँदैन ।
यदि तपाइँ हाम्रा भिडियोहरू मनपराउँनुहुन्छ भने, हाम्रो नयाँ YouTube भिडियो को बारेमा हेर्नुहोस् कसरी तपाइँको आईफोन एक्स,,, वा Plus प्लस DFU ​​पुन: भण्डारण गर्ने । यदि तपाईं यी चरणहरू पढ्न चाहानुहुन्छ भने, प्रक्रिया वास्तवमै उनीहरूको लागि बनाउने भन्दा धेरै सजिलो छ! प्रक्रिया एक रिसेट जस्तै शुरू हुन्छ।
तपाईको आईफोन X, X, वा Plus प्लस लाई DFU पुन: भण्डारण गर्न, भोल्युम अप बटन द्रुत रूपमा थिच्नुहोस् र छोड्नुहोस्, त्यसपछि छिटो थिच्नुहोस् र भोल्युम डाउन बटन छोड्नुहोस्, र त्यसपछि स्क्रिन कालो नभएसम्म साइड बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्।
स्क्रिन कालो हुने बित्तिकै भोल्युम डाउन बटन थिच्नुहोस् र साइड बटन होल्ड गर्न जारी राख्नुहोस्।
Seconds सेकेन्ड पछि, साइड बटन रिलीज गर्नुहोस् तर भोल्युम डाउन बटन होल्ड गर्न जारी राख्नुहोस् जबसम्म तपाईंको आईफोन टुइनस वा फाइन्डरमा देखा पर्दैन।
यो आईट्यून्स वा फाइन्डरमा देखा पर्ने बित्तिकै भोल्युम बटन छोड्नुहोस्। टा-दा! तपाईंको आईफोन DFU मोडमा छ।
नोट: यदि एप्पल लोगो स्क्रीनमा देखा पर्दैछ भने तपाईले भोल्युम डाउन बटनलाई लामो समयसम्म समात्नुभयो। प्रक्रिया सुरुबाट सुरू गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
कसरी एक iPhone XS, XS अधिकतम, वा XF DFU मोडमा राख्न
DFU मोडमा आईफोन XS, XS अधिकतम, XR राख्नको लागि चरणहरू आईफोन,, Plus प्लस र X को लागि चरणहरू जस्तै हुन्। हाम्रो YouTube भिडियो जाँच गर्नुहोस् बारे। एक iPhone XS, XS अधिकतम, वा XF DFU मोडमा राख्दै यदि तपाईं भिजुअल सिक्ने धेरै हुनुहुन्छ भने! हामी मेरो आईफोन XS तपाईको प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा हिँड्न प्रयोग गर्दछौं।
कसरी एक आईफोन ११, ११ प्रो, वा ११ प्रो अधिकतम DFU मोडमा राख्ने
तपाईले आईफोन ११, ११ प्रो र ११ प्रो अधिकतम DFU मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले आईफोन or वा नयाँको लागि गर्नुहुन्छ। जाँच गर्नुहोस् हाम्रो YouTube भिडियो यदि तपाईंलाई प्रक्रिया मार्फत काम गर्न मद्दत चाहिन्छ भने।
यदि तपाईं पढ्नको सट्टा हेर्नुहुन्छ भने ...
हाम्रो नयाँ YouTube ट्यूटोरियल जाँच गर्नुहोस् कि कसरी आईफोनलाई DFU मोडमा राख्ने र कसरी DFU पुन: भण्डारण गर्ने यदि तपाईं यसलाई कार्यमा देख्न चाहनुहुन्छ भने।
चेतावनीको एक शब्द
जब तपाइँ DFU तपाइँको आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, तपाइँको कम्प्युटरले सफ्टवेयरलाई नियन्त्रण गर्ने हरेक बिट कोड मेटाउँछ र पुन: लोड गर्दछ र तपाईको आईफोनमा हार्डवेयर त्यहाँ केहि गलत हुन सम्भावना रहेको छ।
यदि तपाइँको आईफोन कुनै पनि हिसाबले बिग्रिएको छ, र विशेष गरी यदि यो पानी-बिग्रिएको छ भने, एक DFU पुनर्स्थापनाले तपाईंको आईफोनलाई बिगार्न सक्छ। मैले ग्राहकहरुसँग काम गरें जसले एक सानो समस्या हल गर्नका लागि आफ्नो आईफोन पुन: स्थापित गर्ने कोशिस गरे, तर पानीले अर्को कम्पोनेन्ट बिगार्‍यो जसले पुनर्स्थापना पूर्ण हुनबाट रोकेको थियो। सानो समस्याको साथ प्रयोगयोग्य आईफोन पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न नमिल्ने भयो भने यदि DFU पुनर्स्थापना पानी-क्षतिको कारण विफल भयो।
फर्मवेयर के हो? यसले के गर्छ?
फर्मवेयर प्रोग्रामिंग हो जुन तपाईंको उपकरणको हार्डवेयर नियन्त्रण गर्दछ। सफ्टवेयरले सँधै परिवर्तन गर्छ (तपाईले अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहुन्छ र नयाँ ईमेल डाउनलोड गर्नुहुन्छ), हार्डवेयर कहिले परिवर्तन हुँदैन (आशा छ, तपाईले आफ्नो आईफोन खोल्नुहुन्न र यसको कम्पोनेन्टहरू पुन: व्यवस्थित गर्नुहुन्न), र फर्मवेयर लगभग कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन - जब सम्म यो छ लाई
अरू कुन इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा फर्मवेयर छ?
ती सबै! यसको बारेमा सोच्नुहोस्: तपाईंको वाशिंग मेशिन, ड्रायर, टिभी रिमोट, र माइक्रोवेभले बटनहरू, टाइमरहरू र अन्य आधारभूत कार्यहरू नियन्त्रण गर्न फर्मवेयरको प्रयोग गर्दछ। तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न पपकोर्न सेटिंगले तपाईंको माइक्रोवेभमा के गर्छ, त्यसैले यो सफ्टवेयर होईन - यो फर्मवेयर हो।
DFU पुनर्स्थापना: सबै दिन, हरेक दिन।
एप्पल कर्मचारीहरु धेरै आईफोनहरु को बहाल। विकल्प दिइयो, मँ सँधै एक DFU रिस्टोर नियमित वा रिकभरी मोड रिस्टोरमा छनौट गर्नुहोस्। यो आधिकारिक एप्पल नीति होईन र केहि टेकले भन्दछ कि यो ओभरकिल हो, तर यदि आईफोनमा समस्या छ भने सक्छ एक बहाल संग समाधान गर्नुहोस्, एक DFU पुनर्स्थापना यसलाई ठीक गर्ने उत्तम मौका खडा छ।
पढ्नको लागि धन्यबाद र म आशा गर्दछु कि यस लेखले DFU मोड कसरी प्रविष्ट गर्ने र तपाइँ किन यसलाई प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भनेर इन्टरनेटमा केहि गलत सूचनाहरूको स्पस्ट पार्छ। म तपाईंलाई आफ्नो भित्री geekiness अंगालो गर्न प्रोत्साहन। तपाईं गर्व गर्नुपर्छ! अब तपाईं आफ्ना साथीहरू (र बच्चाहरू) लाई भन्न सक्नुहुन्छ, 'हो, मलाई थाहा छ कसरी मेरो आईफोन DFU लाई पुनर्स्थापना गर्ने।'
पढ्न को लागी धन्यवाद र सबै भन्दा राम्रो,